Imwe chete nzira yekushandisa, iyo yakakwira yakavharika-nzvimbo mashandisiro, zvirinani kutaridzika kunoshanda, zvakanyanya kushandiswa muzvivakwa, raibhurari, b kambani gwaro, nezvimwe.
◆ Inogona kushandisa iyo nzvimbo yekuchengetera pane yakajairwa racking.
◆ Iyo inokodzera kune mashoma mashoma mhando hombe nhumbi.
◆ Chiyero chekushandiswa kwepasi chaigona kusvika ku80%.
◆ Unogona kugadzirisa chimwe nechimwe chakanaka, kwete kutanga-mukati, kutanga-kubuda.
◆ Kukwirira kweiyo racking kunogona kuve 12m.
◆ Uchishandisa michina yemagetsi, zvakaoma kuitisa.
◆ Kudhura kwepamusoro, nguva yakareba yekupedzisa sisitimu.
Rail Njanji yevarindi inofanira kuiswa pasi pevhu kuitira kuti mota inofamba ifambe.
HEGERLS nharembozha 2021 yemhando yepamusoro 3000kgs padanho rinotyairwa nemotokari
. Isu tinozvipira kudura rekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
1.Product sumo of Mobile pani
3.1 bhokisi danda tsananguro
4.Production ruzivo rwe mobile rack
4.1Iyo inogona kushandisa iyo nzvimbo yekuchengetera kupfuura yakajairwa racking.
4.2Iyo inokodzera kune mashoma mashoma mhando hombe nhumbi.
4.3 Chiyero chekushandisa kwepasi chaigona kusvika ku80%.
4.4 Iwe unogona kubata neese akanaka, kwete kutanga-mukati, kutanga-kubuda.
4.5Kukwirira kweiyo racking inogona kuve 12m.
Uchishandisa michina yemagetsi, zvinonetsa kuchengetedza.
4.7High mutengo, nguva yakareba yekupedzisa sisitimu.
4.8Chiteshi chevarindi chinofanirwa kuiswa pasi pevhu kuitira kuti iyo shuttle mota ipfuure.
Zvigadzirwa zvinodiwa zve mezzanine rack system
Pashure: HEGERLS Anorema Basa rekuchengetedza
Zvadaro: HEGERLS sundira kumashure racking system
Magetsi Nhare Rack
Magetsi Nhare Racking